ညစ်ညမ်းအမြဲပိုပြီးအစစ်အမှန်ရှာဖွေနေအတွက်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ က်ေနာ္တို႔ေတာ္လွန္ေရးေခတ္ကေတာ္လွန္ေရးေခတ္၊၄ေခတ္နဲ႔ေခတ္သစ္ေတာ္လွန္ေရးေခတ္ကေခတ္နဲ႔အညီေခတ္နဲ႔အညီေခတ္နဲ႔အညီေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်းလောကသည်ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည်။ ဒါဟာမီးတောက်ခေတ်ကာလအတွင်းနည်းနည်းနောက်ကွယ်မှထုတ်လွှတ်,ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ကို5မှပြောင်းထားပြီးတစ်ချိန်က,ဂိမ်းများ၏အရည်အသွေးအဆပြောင်းလဲနေတဲ့စတင်. အကယ်၍သင်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်အတွင်းဂိမ်းများကိုမကစားရသေးပါက၊သင်သည်ယခုအခါအရာရာကိုမည်သို့အံ့သြဖွယ်ရာဖြင့်လွင့်စင်သွားလိမ့်မည်။ အရာအားလုံးဟာမီးလင်းလာကတည်းကဂိမ်းမကစားရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ဆောင်ချက်ထဲမှာဘာတစ်ခုမှတောင်အသိအမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။, အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားလို့ပဲ။ အဆိုပါဂရပ်ဖစ်,အထင်ရှားဆုံးဒြပ်စင်များမှာ,ဒါလက်တွေ့ကျကျဖြစ်လာကြပါပြီနှင့်ဇာတ်ကောင်ကအားလုံးဂိမ်းအိုင်ကွန်မှာကျော်ယောက်ျားတွေဖန်ဆင်းပုံရသည်နိုင်အောင်အသေးစိတ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဂရပ်ဖစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဂိမ်းတွေရဲ့လက်တွေ့အကျဆုံးဒြပ်စင်ကိုရူပဗေဒနဲ့ရွေ့လျားမှုအင်ဂျင်ကပေးထားတာပါ။ ထိုသားငယ်များ၏အလောင်းများကိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်းကြောင့်ပါပဲ။ သငျသညျမြည်းကြိုးကိုဖြည်သောအခါ,ကပြန်ပြီးမသာ,ဒါပေမယ့်လည်းအနီရောင်ထမ်းပိုး. ဤဂိမ်းများတွင်ပင်အသံပြောင်းလဲသွားသည်။, သူတို့ကမိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊အော်ဟစ်ခြင်းနှင့်ပင်အချို့သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက်အသံသရုပ်ဆောင်များကိုအသုံးပြုသည်၊ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းဆော့ဖ်ဝဲသည်ဂိမ်းများတွင်လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုအသံများကွဲပြားနေသည်။
ကျနော်တို့ကဒီဆိုက်ပေါ်မှာဤမျှလောက်များစွာသောအောက်နှင့်အမျိုးအစားများအနေဖြင့်ဂိမ်းရှိသည်နှင့်သင်ဧကန်အမှန်အသင်သည်သင်၏ကြက်ပေါက်ကွဲစေမယ့်အော်ဂဇင်များအတွက်လိုအပ်သောအရာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်ဂိမ်းစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း,သင်ဇာတ်ကောင်မသာပြောင်းလဲနိုင်ပါလိမ့်မည်အဓိပ္ပာယ်,ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတချို့အတွက်ပင်ကြံစည်မှုလိုင်း။ ဤနေရာတွင်အရာအားလုံးကိုအဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်သင်ရေးခံစားရအခါတိုင်းသင်ဒီမှာပြန်လာရန်အကြောင်းပြချက်အများကြီးပေးသွားကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်အခြားအင်္ဂါရပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ကဒီဆိုက်ပေါ်မှာဤမျှလောက်အကြောင်းအရာရှိသည်နှင့်အတူတကွကြောင့်မငြိမ်မသက်ဂိမ်း 200 နာရီကျော်. ဂိမ်းအချို့ကိုသင်နောက်တဖန်သူတို့ကိုကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်သင်ပျင်းရဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဒါကြောင့်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဓိကအမျိုးအစားအားလုံးမှဂိမ်းများရှိသည်၊သို့သော်လူကြိုက်အများဆုံးသောသူများမှာဂူးဂဲလ်လိင်ဂိမ်းများနှင့်စာသားအခြေပြုဂိမ်းများဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုဒ်ရဲ့လိင်စိတ်ဖြေဖျောက်ပုံတွေကသင့်ကိုနည်းလမ်းများစွာနဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသွားမှာပါ။ သူတို့ကိုပိန်လှီအောင်ဒါမှမဟုတ်ဘီကီနီကြီးတွေဒါမှမဟုတ်ဘီကီနီကြီးတွေနဲ့တွဲဝတ်ရင်သူတို့ရဲ့ဆံပင်၊မျက်နှာစတာတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်သည်သူတို့၏လွတ်လပ်မှုကိုရလိမ့်မည်သို့သော်သင်ချင်တယ်။ အဆိုပါဂိမ်းလွတ်လပ်စွာနှင့်လွန်ကဲကဲစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်,ထိုလိင်ဂိမ်းသင်သည်သင်၏ကြက်သီးမွေးညင်းထစေခြင်းနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်၏စံနမူနာဗားရှင်းတူအောင်စေမည်။, ဒီဆိုဒ်ကိုအခမဲ့လက်တွေ့ကျကျညစ်ညမ်းဂိမ်းဟုခေါ်သည်ကတည်းကကျနော်တို့အစစ်အမှန်ဘဝကိုအမှားလုပ်တဲ့ဂိမ်းတွေအများကြီးနှင့်အတူလာ။ ဂိမ်းထဲမှာငါတို့သည်သင်တို့ဇာတ်ကောင်တွေအများကြီးနှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်ပင်သင့်ရဲ့သွေးဆောင်ဖြားယောင်းနည်းစနစ်အပေါ်အလုပ်လုပ်ရလိမ့်မည်သည့်အတွက်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဘဝအတှေ့အကွုံဆောင်ခဲ့ရမည်။ ဒီဂိမ်းကိုမှန်ကန်အသက်တာ ၌ယင်းအပေါ်ထိမှန်ဖို့ဘယ်လိုသူတို့ကိုစဉ်းစားကြောင်းအစီရင်ခံသူကစားသမားရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆိုက္ကိုဖန္တီးလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ကစားသမားအားလံုးရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြကိုခံစားႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးေပးခ်င္ပါတယ္။ ဝင်ရောက်ခွင့်အားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်ကြော်ငြာအချို့ရှိသော်လည်း၊ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆုံးမဲ့ဗီဒီယိုများကိုဖြတ်၍ထိုင်စေပြီးပေါ့ပ်များဖြင့်သင့်ကိုရိုက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်,ငါတို့သည်သင်တို့ကစားကြကုန်အံ့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်မလိုအပ်ပါဘူးနှင့်ကျွန်တော်ပင်ဧည့်သည်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုဆက်ကပ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်ရှိအခြားကစားသမားများနှင့်ဆက်သွယ်ရလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ပျော်စရာအချိန်များအတွက်လိုအပ်သမျှရှိသည်။ ဒီကိုလာပြီးဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ပါနဲ့။